Thailandy: Nakaton’ny MICT ny “Liberal Thai”! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2019 3:35 GMT
Fahalalahana manohitra ny sivana ao Thailandy na Freedom Against Censorship Thailand (FACT).
Vao avy nahita tranokalam-baovao amin'ny teny Thailandey, Liberal Thai nakaton'ny proxy mangarahara mitodra ny mpiserasera mankany amin'ny minisiteran'ny Teknolojiam-baovao sy ny fifandraisana ao Thailandy izahay.
Tranonkalam-baovao mandika lahatsora-baovao amin'ny teny anglisy ho amin'ny teny Thailandey ny Liberal Thai ka ahafahan'ireo mpamaky Thailandey miditra amin'izany, indrindra ireo gadra politika ao Thailandy.
Ny lahatsora-baovao hany mety ho ahiahiana dia ny dikanteny Thailandey tao amin'ny LT ny lahatsoratra “korontana ara-politika ao Thailandy” avy amin'ny Asia Sentinel tamin'ny 28 Oktobra. Tsy voasakana ny fitantaran'ny PPT ity lahatsoratra ity, ary indrindra fa ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy.
Azo lazaina ho faniratsirana ny mpanjaka ve ny “fisolelahana” (รัชทายาทที่อ่อนแอ) amin'izao fotoana izao?
Mazava ho azy, ny famaritana ny “fisolelahana” avy amin'ny rakibolana Scots Gaelic dia malemy, marefo, tsy mahomby, tsy mahay, tsy misy dikany, tsy misy ilana azy, tsy miahy, tsy tompon'andraikitra, tsy miraharaha, kamo, tsy manana tanjona na lanjany, tsy azo antoka fa hahomby.
Zara raha mihevitra izahay fa azo ampiharina amin'ny fifandimbiasana ao Thailandy ireo famaritana ireo. Ny marina dia tsy fantatsika fotsiny satria tsy mbola notsaraina ny mpanjaka manaraka ao Thailandy.
Na dia izany aza, tsy mampanjavona ny vaovao velively ny fanafoanana ny vaovao amin'ny alàlan'ny fanakanana tranonkala. Manana zavatra betsaka hianarana amin'ny politika ao an-toerana i Thailandy (manana filoham-pirenena vahiny manoro hevitra antsika momba ny fitroarana Patani izahay) sy ny fifandraisana iraisam-pirenena. Tsy maninona izay halalin'ny fasika ezahin'ny fitondram-panjakana Thailandey andevenana ny lohanay, zava-dehibe kosa izay eritreretin'ny hafa momba anay.
Iray amin'ireo tranonkala vitsivitsy miezaka manome fahafahana ho an'ny Thailandey hiditra amin'ny hevitra rehetra ny Liberal Thai mba hahafahantsika mandray fanapahan-kevitra tompon'andraikitra ho an'ny tenantsika, amin'ny maha-mpiara-monina antsika.
Miantso ny minisiteran'ny Teknolojiam-baovao sy ny fifandraisana izahay mba hanamarina ny sivana toy izany ary mangataka didim-pitsarana fanakatonana ny Liberal Thai araka izay takian'ny lalàna Thailandey.
Ny fandikan-teny Thailandey sy ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy dia mbola azo idirana amin'ny alalan'ny proxy sy VPN tsy manondro anarana: